Tonga any London Gatwick i Cobalt Air
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Tonga any London Gatwick i Cobalt Air
Orinasa cypriot lehibe indrindra manompo an'i Gatwick enina andro isan-kerinandro
Ny Cobalt Air, kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any Sipra dia rehareha fa hanambara serivisy enina vaovao isan-kerinandro amin'ity ririnina ity, mampifandray an'i London Gatwick mivantana amin'i Larnaca, Sipra.
Andrew Madar, CEO an'ny Cobalt Air:
“Faly aho fa tonga eto Londres Gatwick androany amin'ny sidina voalohany ataontsika avy any Larnaca. Ny Cobalt dia lasa zotram-piaramanidina ankafizin'ny mponina any Sipra; ary tsy afaka miandry izahay hampiseho aminao ny fandraisana tsara sy ny serivisy an-tsambo anao rehefa manomboka ny fialantsasatra na ny dia ataonao avy any London mankany Sipra.
“Tena miavonavona aho na ny firenentsika koa. Ao amin'ny Cobalt dia fantatray ny lanjan'ny fahamendrehana, ny vidin'ny fifaninanana ary ny tena fifantohana amin'ny fikarakaran'ny mpanjifa - izay nekena tao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny kaompaniam-pitaterana an-dranomasina tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Samy hafa tanteraka isika. Tsy lova, fa tsy LCC, Cobalt fotsiny. ”
Cobalt Air izao dia manompo toerana 16 manerana ny firenena 10 samy hafa avy any an-tranony any Sipra. Ny orinasa dia ekena erantany ho toy ny kaompaniam-piaramanidina Start-up tsara indrindra amin'ny 2017 * tamin'ny lanonana fankalazana iraisam-pirenena tany London tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Amin'ny volana Desambra, Cobalt dia hanangana serivisy kilasy fandraharahana vaovao amin'ny làlan'ny Gatwick, izay ahitana seza fandraharahana miharo habe amin'ny fikirakirana 2 amin'ny 2. Izany dia hitondra ambaratonga vaovao fampiononana orinasa amin'ny làlana.
Sipra dia tohanana mahaliana amin'ny toetrandro amin'ny ririnina amin'ny hetsika isan-karazany ao anatin'izany ny golf, fitsangantsangana, sambo, fahagola, famiazam-boaloboka, fanaovana ski ambony any an-tendrombohitra Troodos, na fitsangatsanganana amoron-dranomasina fotsiny.
Stephen King, Head na Airline Fifandraisana, seranam-piaramanidina Gatwick, dia nilaza hoe: "Faly izahay miarahaba ny Cobalt Air nandresy tamin'ny Gatwick. Ny serivisy enina andro isan-kerinandro mahazatra dia mety ho malaza amin'ireo mpandeha fialan-tsasatra sy ireo izay manidina amin'ny raharaham-barotra, indrindra satria manolotra sidina mahavariana sy serivisy kilasy fandraharahana manintona ny seranam-piaramanidina.
Mpitondra dia 145 no manery ny Kaongresy hanampy ny seranam-piaramanidina amerikana
Budapest Airport dia mandefa ny ririnina 2017/18 miaraka amin'i Ryanair